ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျကစားပွီးနောကျ ရနျးနဈချအတှကျ အဓိကကတြဲ့အစိတျအပိုငျးဖွဈလာတော့မယျ့ ရျောနယျလျဒို – Sports A2Z
ပဲလစျေ့နဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျကစားပွီးနောကျ ရနျးနဈချအတှကျ အဓိကကတြဲ့အစိတျအပိုငျးဖွဈလာတော့မယျ့ ရျောနယျလျဒို
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ယာယီနညျးပွ ရာ့လျဖျ ရနျးနဈချက ယူနိုကျတကျကို ၎င်းငျးရဲ့ တိုတောငျးတဲ့ နညျးပွသကျတမျးအတှငျး တိုကျစဈအမွနျကစားနိုငျတဲ့အသငျးကွီး ဖွဈလာစခေငျြတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဓိကမေးစရာရှိလာတာက အသကျ ၃၇ နှဈပွညျ့မှေးနရေ့ောကျဖို့ လအနညျးငယျသာ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုက အဲဒီအတိုငျး ကစားနိုငျပါ့မလားဆိုတာဖွဈပွီး အဲဒီလို ကစားနိုငျသေးလားဆိုတာကို ပဲလစျေ့ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေညေ့ပှဲစဉျမှာ ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့က အဖွပေေးခဲ့ပါတယျ။
ရနျးနဈချက အာဆငျနယျကို ၃-၂ နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ ကွာပသပတေးနပှေဲ့စဉျမှာ ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့ ကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ပတျသကျပွီး ခြီးကြူးစကားပွောကွားခဲ့ပွီး ဒီအသကျအရှယျမှာ ဒီလောကျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျမှုမြိုးနဲ့ ကစားနတေဲ့ ကစားသမားမြိုး တခါမှ မတှခေဲ့ဖူးဘူးလို့ ခြီးကြူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ယာယီနညျးပွသဈ ရနျးနဈချက အဲဒီပှဲအပွီး နာရီ ၆၀ အကွာမှာ သူ ပွောခဲ့တဲ့စကားအတိုငျးဟုတျ၊ မဟုတျ သကျသပွေသဖို့အတှကျ ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့ကို ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပွီး ရျောနယျလျဒိုကလညျး ရကျရျှဖို့ဒျနဲ့အတူ ကစားကှကျသဈဖွဈတဲ့ ၄-၂-၂-၂ ကစားကှကျမှာ အကောငျးဆုံးကစားပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျဟာ ပွိုငျဘကျခံစဈဘကျခွမျးမှာ ပိုမိုဖိအားပေးကစားနိုငျခဲ့ပွီး ပှဲအရှိနျကလညျး ပိုပွီးတော့ ပွငျးထနျခဲ့တာကို မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။
ရကျရျှဖို့ဒျဟာ တိုကျစဈမှာ အတူတူ တှဲကစားနရေတဲ့ အသငျးဖျောထကျ ၁၃ နှဈ ငယျတာကွောငျ့ ပွေးလှားပွီး ဘောလုံးနောကျလိုကျတာကို ပိုမို လုပျဆောငျခဲ့ပမေယျ့ ရျောနယျလျဒိုကလညျး မခိုမကပျ ကစားခဲ့တာကို မွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။ ဂြူဗငျတိုကျစဈမှူးဟောငျးဟာ တဝကျသခြောတဲ့ အခှငျ့အရေး အမြားအပွားရခဲ့ပွီး လကျရှိခွစှေမျးအရ ဂိုးသှငျးယူနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ကောငျး မြှျောလငျ့မိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျးပွနျလညျစတငျခြိနျမှာတော့ ပထမပိုငျးတုနျးကတုနျးနဲ့ ယှဉျရငျ ပှဲအရှိနျက ပွငျးထနျမှု အနညျးငယျ လြော့ကခြဲ့ပွီး ပှဲဆကျတှမြေားတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုကို ယူနိုကျတကျကစားသမားတှေ ခံစားခဲ့ရတာကွောငျ့လညျး ဖွဈကောငျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက ရနျးနဈချဟာ ရျောနယျလျဒိုထကျစာရငျ တိုကျစဈကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ ဆနျခြိုနဲ့ ရကျရျှဖို့ဒျတို့ကို လူစားလဲလှယျဖို့ ရှေးခယျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက ဂိုးသှငျးဖို့ လိုအပျနခေဲ့ခြိနျမှာ နညျးပွသဈက ၎င်းငျးရဲ့ ကြောနံပါတျ ၇ ဟာ အသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးပေးဖို့ အဖွဈနိုငျဆုံးသူအဖွဈ ခံစားခဲ့ရတယျဆိုတာ ရှငျးလငျး နခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုဟာ ဒုတိယပိုငျးတဈလြှောကျလုံး အသငျးက တိုကျစဈဆငျဖို့ ကွိုးပမျးရာမှာ လမျးတဝကျမှာတငျ ဘောလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တာကွောငျ့ စိတျပကျြခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုက ဂိုးသှငျးယူနိုငျဖို့အတှကျ အခြိနျတဈခုရှိနဆေဲဆိုတာ သိရှိနခေဲ့ပွီး အဲဒါကို သကျသပွေသတဲ့အနနေဲ့ ဖရကျဒျက အနိုငျဂိုးကို ကနျသှငျးယူသှားခဲ့တဲ့အတှကျ ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့အနနေဲ့ ဂုဏျယူမိခဲ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးက ၁-၀ နဲ့ ဦးဆောငျနခြေိနျမှာ ရနျးနဈချဟာ နောကျထပျ အပွောငျးအလဲပွုလုပျဖို့အတှကျ ရှေးခယျြခဲ့ပမေယျ့ အဲဒါက ရျောနယျလျဒိုမဟုတျခဲ့ဘဲ ပျေါတူဂီကှငျးလယျကစားသမား ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈ ဖွဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျလျဒိုဟာ နာကငျြအခြိနျပိုမှာ အလှနျအန်တရာယျမြားတဲ့ အလှတျတညျကနျဘောကို ခေါငျးတိုကျရှငျးထုတျပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့ ဦးဆောငျမှုကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးနိုငျအောငျ အကူအညီပေးခဲ့ပါတယျ။ အစောပိုငျးနတှေ့တေုနျးက ဒီပှဲကထကျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ပှဲစဉျတှေ ရရှိနိုငျခဲ့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ပျေါတူဂီကွယျပှငျ့ဟာ လှဲခြျောမှုတှေ အမြားအပွားကို ရငျဆိုငျခဲ့ရပွီးနောကျ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဒေါသထှကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Manchester United’s Portuguese striker Cristiano Ronaldo (L) and Manchester United German Interim head coach Ralf Rangnick (R) shake hands after the final whistle of the English Premier League football match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 5, 2021. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
ဒါပမေယျ့ အခုပွသနတေဲ့ လက်ခဏာတှေ အားလုံးက မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးမှာ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုနဲ့ ရာ့လျဖျ ရနျးနဈချတို့ အတူတူအလုပျတှဲလုပျလို့ရတယျဆိုတာကို ပွသဖို့ တဈပှဲပဲ အခြိနျယူခဲ့ရတာလညျး ဖွဈပွီး ရျောနယျလျဒိုဟာ ရနျးနဈချရဲ့လကျအောကျမှာ ခတျေသဈတဈခု စတငျထူထောငျမယျ့အသငျးအတှကျ ကွီးမားတဲ့အစိတျအပိုငျးအဖွဈ ပါဝငျကစားပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျယာယီနညျးပွ ရနျးနဈချက ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးကို အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ပှဲအပွီးမှာ ဘလှနျဒေါ ၅ ဆုရှငျနဲ့ပတျသကျပွီး ခုလိုပဲ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ “ကြှနျတျောတို့ တိုကျစဈမှူး ၂ ဦးနဲ့ ကစားခငျြခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တိုကျစဈဗဟိုနရောမှာပေါ့။ ဒါနဲ့စကားမစပျ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဘောလုံးမပါဘဲ လုပျအားက ထိပျတနျးပဲဗြာ”လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ယာယီနည်းပြ ရာ့လ်ဖ် ရန်းနစ်ခ်က ယူနိုက်တက်ကို ၎င်းရဲ့ တိုတောင်းတဲ့ နည်းပြသက်တမ်းအတွင်း တိုက်စစ်အမြန်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းကြီး ဖြစ်လာစေချင်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဓိကမေးစရာရှိလာတာက အသက် ၃၇ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရောက်ဖို့ လအနည်းငယ်သာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုက အဲဒီအတိုင်း ကစားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာဖြစ်ပြီး အဲဒီလို ကစားနိုင်သေးလားဆိုတာကို ပဲလေ့စ်ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ညပွဲစဉ်မှာ ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်က အဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်းနစ်ခ်က အာဆင်နယ်ကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ကြာပသပတေးနေ့ပွဲစဉ်မှာ ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့် ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချီးကျူးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒီလောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုမျိုးနဲ့ ကစားနေတဲ့ ကစားသမားမျိုး တခါမှ မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ချီးကျူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီနည်းပြသစ် ရန်းနစ်ခ်က အဲဒီပွဲအပြီး နာရီ ၆၀ အကြာမှာ သူ ပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းဟုတ်၊ မဟုတ် သက်သေပြသဖို့အတွက် ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း ရက်ရ်ှဖို့ဒ်နဲ့အတူ ကစားကွက်သစ်ဖြစ်တဲ့ ၄-၂-၂-၂ ကစားကွက်မှာ အကောင်းဆုံးကစားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယယူနိုက်တက်ဟာ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ဘက်ခြမ်းမှာ ပိုမိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲအရှိန်ကလည်း ပိုပြီးတော့ ပြင်းထန်ခဲ့တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရက်ရ်ှဖို့ဒ်ဟာ တိုက်စစ်မှာ အတူတူ တွဲကစားနေရတဲ့ အသင်းဖော်ထက် ၁၃ နှစ် ငယ်တာကြောင့် ပြေးလွှားပြီး ဘောလုံးနောက်လိုက်တာကို ပိုမို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း မခိုမကပ် ကစားခဲ့တာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဂျူဗင်တိုက်စစ်မှူးဟောင်းဟာ တဝက်သေချာတဲ့ အခွင့်အရေး အများအပြားရခဲ့ပြီး လက်ရှိခြေစွမ်းအရ ဂိုးသွင်းယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကောင်း မျှော်လင့်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့ ပထမပိုင်းတုန်းကတုန်းနဲ့ ယှဉ်ရင် ပွဲအရှိန်က ပြင်းထန်မှု အနည်းငယ် လျော့ကျခဲ့ပြီး ပွဲဆက်တွေများတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေ ခံစားခဲ့ရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ရန်းနစ်ခ်ဟာ ရော်နယ်လ်ဒိုထက်စာရင် တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဆန်ချိုနဲ့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်တို့ကို လူစားလဲလှယ်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ဂိုးသွင်းဖို့ လိုအပ်နေခဲ့ချိန်မှာ နည်းပြသစ်က ၎င်းရဲ့ ကျောနံပါတ် ၇ ဟာ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းပေးဖို့ အဖြစ်နိုင်ဆုံးသူအဖြစ် ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်း နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒုတိယပိုင်းတစ်လျှောက်လုံး အသင်းက တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ လမ်းတဝက်မှာတင် ဘောလုံးဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုက ဂိုးသွင်းယူနိုင်ဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုရှိနေဆဲဆိုတာ သိရှိနေခဲ့ပြီး အဲဒါကို သက်သေပြသတဲ့အနေနဲ့ ဖရက်ဒ်က အနိုင်ဂိုးကို ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တဲ့အတွက် ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိခဲ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက ၁-၀ နဲ့ ဦးဆောင်နေချိန်မှာ ရန်းနစ်ခ်ဟာ နောက်ထပ် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါက ရော်နယ်လ်ဒိုမဟုတ်ခဲ့ဘဲ ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်ကစားသမား ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ် ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နာကျင်အချိန်ပိုမှာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ အလွတ်တည်ကန်ဘောကို ခေါင်းတိုက်ရှင်းထုတ်ပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းနေ့တွေတုန်းက ဒီပွဲကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေ ရရှိနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ်တူဂီကြယ်ပွင့်ဟာ လွဲချော်မှုတွေ အများအပြားကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုပြသနေတဲ့ လက္ခဏာတွေ အားလုံးက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ရာ့လ်ဖ် ရန်းနစ်ခ်တို့ အတူတူအလုပ်တွဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို ပြသဖို့ တစ်ပွဲပဲ အချိန်ယူခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရန်းနစ်ခ်ရဲ့လက်အောက်မှာ ခေတ်သစ်တစ်ခု စတင်ထူထောင်မယ့်အသင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်ကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ယာယီနည်းပြ ရန်းနစ်ခ်က ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဘလွန်ဒေါ ၅ ဆုရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုလိုပဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ တိုက်စစ်မှူး ၂ ဦးနဲ့ ကစားချင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုက်စစ်ဗဟိုနေရာမှာပေါ့။ ဒါနဲ့စကားမစပ် ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဘောလုံးမပါဘဲ လုပ်အားက ထိပ်တန်းပဲဗျာ”လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးလျနဲ့အနာဂတျအကွောငျးကို အငျတာဗြူးမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး အဖွပေေးသှားခဲ့တဲ့ ဆာလား